Global Voices teny Malagasy » Mpanoratra Roa Nametra-Pialana Ampahibemaso Ao Anatin’ny Finiavan’ny Antoko Komonista Shinoa Hangeja Ny Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2016 17:42 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Teo anivon'ny tolona ara-potokevitra hatrany ny literatiora sy ny zavakanto teo amin'ny tantaram-pirenena shinoa hatramin'ny Forum Yan'an momba ny Literatiora sy ny Zavakanto tamin'ny 1942. Sary manantantara.
Niala tamin'ny toerana fanta-bahoaka amin'ny mahafiloha lefitry ny Fikambanan'ny Mpanoratra Shina sampana ao Suzhou azy tamin'ny tapatapaky ny volana marsa teo ho eo i Jing Ge sy i Ye Mi, samy Shinoa mpanoratra. Ny taratasy fametraham-pialan'izy roa ireo dia samy nivoaka teo amin'ny Weibo sehatra fampitam-baovao sosialy malaza avokoa ary nahazo fampitan-dahatsoratra, fanehoan-kevitra ary hafatra fiderana maro.
Sendika nasionaly tarihan'ny Antoko Komonista Shinoa (CCP) ny Fikambanan'ny Mpanoratra Shina. Manana mpikambana 9.301 mieli-patrana ao amin'ny sampany miisa 44 ny fikambanana, ary ny tanjon'ny fikambanana dia ny hampiroborobo ny literatiora sy ny fisainana sosialista.
Ny sasany mandika ny fialan'i Jing Ge sy i Ye Mi ho fomba iray hanehoana tsy fahafaliana amin'ny hevitra fa natao hanompo sy hiaro ny fotokevitry ny CCP ny literatiora sy ny zavakanto, ary nosoritan'ny governemantan'ny filoha shinoa Xi Jinping nandritra ny taona maro izany fihevitra izany.
Navoakan'i  Jing Ge tao amin'ny eibo tamin'ny 12 marsa ny pikantsarin'ny taratasy fametraham-pialany nasiany fanamarihana:
Fanambarana fialana, miangavy aelezo ny teny.
Ao amin'ny taratasiny, nasongadiny fa ny fanapahan-keviny dia avy amin'ny fahatsapan'ny tenany :
Filoha lefitry ny Fikambanan'ny Mpanoratra tao Suzhou nandritra ny folo taona mahery aho. Efa lasa ny mahavaovao ny toerana ary mahatsiaro leon'ny fanatsaran'endrika aho. Ankehitriny aho miala ary mijanona amin'izany tahaka ny kiraro tonta. Voalohany, tsy karamaina aho. Faharoa, tsy manana fahefana aho. Fahatelo, tsy mahavita mampivelatra ny literatiora ao Suzhou aho. Tsy misy tombontsoa ho ahy sy ny hafa ny toerana misy ahy ary kely no mba mijanona. Niverimberina tao an-tsaiko hatrany izany fahatsapana izany amin'ny alina ary mahatsiaro menatra aho. Vao haingana, tampoka teo dia mahatsiaro ho maloto amin'ny asa izay ataoko aho. Ahy manokana izany fahatsapana izany ary tsy mari-pototra. Saingy mila mamaha ny olan'ny fahatsapana ho menatra sy maloto aho na ho tsindrian-daona tahaka ny olona manana fikorontanana ara-tsaina. Ankehitriny efa ho tapitra ny fehim-potoana mahatompon'andraikitra ambony ahy ao amin'ny Fikambanan'ny Mpanoratra Suzhou, tsy maintsy manao fanambarana ampahibemaso aho fa manomboka anio, miala amin'ny toerana mahafiloha lefitry ny Fikambanan'ny Mpanoratra Suzhou aho. Efa mba nanonofy ihany aho indray mandeha fa ho lasa filohan'ny fikambanana, natahotra fatratra aho ary taitra tao anatin'ny hatsembohana nanerana ny vatako iray manontolo. Mampihomehy izany. Tsy tokony lasa hojerena ho voina ny toerana maha-filoha, saingy nanana izany tahotra izany aho. Mitovy amin'izany ihany ny toeran'ny filoha lefitra. Filoha lefitra aho taloha fa ankehitriny lasa aho.
Nivoaka tao amin'ny media sosialy ny fanambaran'i Ye Mi ny ampitso , 13 Marsa. Nisy naoty nipaingotra taminy:
Noho ny hafa ary indrindra noho izaho. Noho ny literatiora ary mihoatra noho izany noho ny fiainako. Inty ny fanambarana fialana. (Noho ny tahotra amin'ny mbola mety itsabahana amin'ny soratro sy ny asako an-trano, dia hotapahiko ny fiaovam-pifandraisako ary hidiko ny varavarambeko. Manantena aho fa hahatakatra ny namako.)
Nambarany tao amin'ny fanambarana fialany ny fangidiam-panahiny manoloana ny toe-draharaha ankehitriny eo amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny literatiora:
Mifanerasera mahalana amin'ny mpanoratra ao Suzhou aho saingy mijery ihany koa izay mitranga eto amin'izao tontolo izao. Tsy hita eto amin'izao tontolo izao intsony ny hafanana tena izy. Mihapotika ny kolontsaina. Toeram-pivorian'ny mpandala literatiora hatry ny talohabe i Suzhou. Nanana fomban-drazana tsara amin'ny fanatrarana ny idealiny izy. Saingy efa levona izany fomban-drazana izany ankehitriny. Amin'ny maha olon'ny tontolon'ny literatiora ahy, tena manahy aho fa tsy afa-manoatra. Satria tsy nanana adidy hafa aho ary miha-antitra, dia noraisiko ny toeran'ny filoha lefitry ny Fikambanan'ny Mpanoratra Jiangsu. Indraindray aho mahatsapa fa tsy nanao na inona na inona tamin'io toerana io ary mahatsiaro malahelo aho. Ankehitriny efa ho tapitra ny fehim-potoana mahatompon'andraikitra ambony amin'ny Fikambanan'ny Mpanoratra Suzhou ahy, vonona tanteraka ny hiala amin'ny toerana maha filoha lefitry ny Fikambanan'ny Mpanoratra Suzhou aho amin'ny fanantenana fa hisy ra vaovao hanorotoro indray ny sehatry ny literatioran'i Suzhou.
‘Hazo amoron-dalana’ sy ‘setroka tsy mety miala’
Nahazo tehaka tamin'ny Shinoa mpiserasera maro ny fialan-dry zareo. Eto ambany eto ny roa amin'ny fanehoan-kevitra hita teo ambanin'ny fanambaran-dry zareo:
Amin'ny fialàny ireo mpanoratra ireo afa-nanafa-tena amin'ny anjara asan'ny ‘hazo amoron-dalana’ [Hazo natsatoka hamaritana ny ny zotran'ny lalana]. Rehefa miverina any ambanivohitra mangina ry zareo dia afa-mijery amin'ny saina mazava sy mieritreritra malalaka. Manome fanantenana iadiana amin'ny setroka tsy mety miala amin'ny tontolon'ny literatiora sy ny zavakanto izao ny “rivotra voajanahary” ao Suzhou.
Be herimpo! Tokony ho mahatoky sy hanaraka ny fony madio ny mpanoratra. Saingy ahoana no hiarovan'ny olona hafa ny fotokeviny tahaka anao?
Teo anivon'ny ady ara-pirehan-kevitra ataon'ny manampahefana ao amin'ny antoko, araka izay hita taratra ao amin'ny kabariny nandritra ny fihaonamben'i Beijing eo amin'ny literatiora sy ny zavakanto  tamin'ny 2014 ny Media, ny literatiora azy ny zavakanto. Nandritra ny fihaonambe no nideran'i Xi an'i Zhou Xiaoping  sy i Hua Qianfang, mpaneho hevitra an'aterineto anankiroa mampiady hevitra izay nanomboka ny fanentanana hanoherana ireo mpitari-kevitra fanta-bahoaka, noho ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny “fampielezana angovo miabo”.
Hatramin'izay fotoana izay no asa soratr'i Zhou no nivoaka matetika amin'ny sehatra fampitam-baovao mikambana amin'antoko, ka anatin'izany ny Isanandrom-Bahoaka, ny Xinhua ary ny Global Times.
Ao amin'ny Twitter, i @laoka01 maneso ny politika ara-literatioran'i Xi amin'ny alalan'ny poezia sy sariitatra ara-politika iray nataon'i biantailajiao:
Nanolo-tena i Zhou Daiyu [Anara-bositr'i Zhou Xiaoping], mankafy safosafo i Hua Yangji [anaram-bositr'i Hua Qianfang]. Miady mafy hilelaka ny fitombenany. Vehivavy antitra iray misaona ny fidabohan'ny tendrombohitra dimy lehibe [Shina].
Nampihozongozona ny tontolon'ny literatiora sy ny zavakanto shinoa ny fampakarana voninahitra ireo kintana misandratra anankiroa ireo, izay nanangana ny lalan'asany amin'ny maha-mpaneho hevitra an'aterineto voakarama azy fantatra amin'ny hoe Tafiky ny 50 Cent. Niaraka tao amin'ny fihaonamben'ny 2014 ry zareo manondro fa eo ambany fitarihan'i Xi, dia tokony ho fitaovana ara-politikan'ny antoko ny literatiora.
Ny zavamisy dia nanome akony ny kabarin'i Mao Zedong, izay manara-maso ny fananganana ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina ny kabarin'i Xi ary ireo nitondra dia fantatra tamin'ny tolona ara-pirehankevitra mahery vaika, tamin'ny Fihaonamben'i Ya'nan momba ny literatiora sy ny zavakanto tamin'ny 1942. Izany toejavatra izany no nanamarika ny fanombohan'ny Fanentanam-Panitsiana , fanentanana ara-politika hanamafisana ny fitarihan'i Mao ao amin'ny antoko. Miverina ve ny tantara? Ny fotoana no hilaza izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/31/80344/
 ny ampitso: http://www.weibo.com/1223326817/Dm1EOBz6K?from=page_1035051223326817_profile&wvr=6&mod=weibotime
 kabariny nandritra ny fihaonamben'i Beijing eo amin'ny literatiora sy ny zavakanto: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c_1116825558.htm
 Zhou Xiaoping: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhou_Xiaoping
 October 16, 2014: https://twitter.com/laoka01/status/522635622133927938